Fikradda UFO ee ka timid Dell, tartanka tooska ah ee tooska ah ee Nintendo Switch | War gadget
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Consolas, Dhacdooyinka, Noticias, Videogames
Waa waxa aan ka raadineyno dhacdooyinka caalamiga ah, qalab iyo aalado cusub oo ku dari doona buug-yaraha laga heli karo suuqa. Kiiskan, oo ka socda soo saaraha caanka ah ee kombiyuutarada qaybaha waxaan awoodnay inaan wax ka baranno fikradda aaladda oo aad noogu taqaanno, fikradda UFO.
In kasta oo mudnaanta keliya waa noocWax walba waxay muujinayaan inay ku jiraan wajiga horumarka. Waana wax ka badan inta suurtagal ah in sanadka 2.020 oo dhan uu gaari doono dhammaan dukaamada. Konsol la muuji Nintendo taasi waxay soo jiitay wareegyo kala duwan oo "gamers" ah waa aad ugu dhow inuu suuqa kula yeesho tartan toos ah.
Fikradda UFO, oo si toos ah ula tartanta Beddelka
Sida aan ku aragno sawirada fikradda UFO waa la wici karaa Wareejinta Nintendo ee Dell. Qaabkeeda waa la raad raacayaa, dadweynaha loogu talo galayna waa isku mid. Macluumaad yar ayaa wali ka soo baxay waxa ay Dell diyaar u tahay inay ku biiriso qaybtaan. Oo su’aashu waxay tahay haddii awoodi doonaa inuu u istaago ilaa adduun dhab ah oo awood leh.
Hadda waxaan ognahay in qunsuliyada ay yeelan doonto a 8-inch shaashad leh 1200p xal. Iyo kontaroolada dhinacakuwaas oo sidoo kale laga saari karo, Si gooni gooni ah ugu shaqee sida kontaroolada aasaasiga ah, ama si wada jir ah u xakameyn buuxda. Sida ku saabsan guntinta aan ku dhajin lahaa, waxaan kaliya ognahay inay noqon doonto a XNUMX-ka Gen Intel.
Suurtagal ma tahay in lagu xisaabtamo dhammaan awooda kumbuyuutarka Alienware ee ku jira qalab yar oo la qaadan karo? Haddii mashruucan cajiibka ah la fuliyo oo fikradda UFO ay noqoto mid dhab ah, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan isku hallayno a Windows yar 10, laakiin awood u leh inuu ahaado awood u leh socodsiinta ciyaaraha ugu baahida badan.
Haddii aan eegno isku xirnaanta sidoo kale waxay bixisaa dhowr fursadood. Sidii la filayay, Fikradda UFO ayaa soo muuqan doonta Isku xirnaanta Bluetooth, Wifi iyo xitaa la a Dekedda Thunderbolt. Waxay kaloo lahaan laheyd Dekedaha USB kaas oo aan ku xiri karno jiir ama teebabka si aan ugu isticmaalno PC-ga caadiga ah. Miyaynu wajahnay a kombiyuutar mini loogu talagalay cayaartoyda? Nintendo A Faytamiin beddelashada? Miyaad aragtay in aaladda noocan ah laga yaabo inay ku leedahay farqi suuqa?
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Noticias » Dell wuxuu soo bandhigayaa Fikradda UFO, "nambarkiisa" ee Nintendo Switch
Maxaa laga daawan karaa Netflix iyo HBO bisha Janaayo 2020